बोर्डेक्स मिक्सचर - विकिपिडिया
अङ्गुरका पातहरूमा बोर्डो मिश्रणको प्रयोग
बोर्डेक्स मिक्सचर वा वोर्डो मिश्रण (अङ्ग्रेजी: Bordeaux mixture) चुन (स्लेक्ड लाईम; Ca(OH)2) र नीलोतुथो (कपर सल्फेट; CuSO4) घोलेर बनाइएको घोल हो । बगैँचा, फलफूलका फार्महरूमा ढुसी जन्य जीवाणुहरू बाट बच्नका लागि बोर्डो मिश्रणको प्रयोग गरिन्छ । रोग लाग्नु अघि नै प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र मिश्रण प्रभावाकारी हुन्छ । उन्नाइसौं शताब्दीमा पहिलो पटक फ्रान्समा यो मिश्रण बनाइएको थियो ।
२ मुख्य प्रयोग
३ बनाइने विधि
उन्नाइसौं शताब्दीमा युरोपमा अङ्गुरमा थुप्रै रोगहरु देखिए । बोर्डेक्स विश्वविद्यालयका वनस्पति प्रध्यापक पियर्अ-मेरी-अलेक्सीस मिल्याडर्टले सडक छेउका अङ्गुरका बोटहरू स्वस्थ देखे । त्यहाँ बटुवाहरूलाई अङ्गुरको बोटबाट विकर्षण होस् भन्ने हेतुले चुन र निलो तुथो लगाएको पाए । पियर्अले, अरनेष्ट डेबिडसँग थप अनुसन्धान पछि आफ्नो नतिजा सन् १८८५ मा प्रकाशित गरेर मिश्रणको प्रयोगको प्रोत्साहन गरे ।
फ्रान्समा वोर्डो मिश्रणलाई मिलार्डेट-डेबिड टेर्टमेन्ट पनि भनिन्छ ।
मुख्य प्रयोग[सम्पादन गर्ने]
यसको प्रयोग 'ढुसी' बाट हुने रोगहरुबाट बोटविरुवा बचाउन प्रयोग गरिन्छ । डढुवा (ब्लाईट), दादे (स्क्याब) र लाही किरा (एफिड्स) जस्ता रोग र किराहरूबाट बचाउन यसको प्रयोग गरिन्छ ।
यसलाई अर्गानिक कृषिमा प्रयोग गरिन्छ ।
बनाइने विधि[सम्पादन गर्ने]
१०० ग्राम चून र १०० ग्राम नीलोतुथो भिन्नै भिन्नै भाँडामा पिसिन्छ । सँगै १० लिटरको पानी पनि नापेर राखिन्छ । १% बोर्डेक्स मिक्स्चरका निम्ति एक किलो चुन, एक किलो निलोतुथो १०० लिटर पानीमा मिसाइने मात्रा हो । यसलाई बोटका जरा र काण्डमा प्रयोग गरिन्छ । ०.५% को बोर्डेक्स मिक्स्चर भने पातहरुमा बढी प्रयोग गरिन्छ । मिक्स्चरको pH न्युट्रल नै हुनुपर्छ ।
चून र नीलोतुथो भिन्नभिन्न भाँडामा अलिकति पानीमा घोलिन्छ । यसलाई १० लिटर पानीमा मिसाई पुन: घोलिन्छ । यो सिधै उमेर अनुसार १-१५ बोटलाई छर्न पुग्छ ।
मिक्स्चरमा हुने (Cu2+) आयन्सले (क्युप्रिक हाइड्रोअक्साइड बाट प्राप्त हुने) ढुसीलाई हुर्कन नदिई जैविक प्रक्रियालाई असर गर्दछ । यसका निम्ति ढुसी लाग्नु भन्दा पहिलै मिक्स्चरको प्रयोग भएको हुनुपर्दछ । पानीले सजिलै पखालिन सक्ने हुनाले पनि त्यति उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । साधारण रुपमा जाडोको समयमा मिक्स्चरको प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर चिसो र बादल लागेको अवस्थामा प्रयोग नगर्दा नै उत्तम हुन्छ ।
रासायनिक प्रक्रिया : CuSO4 + Ca OH)2= Cu(OH)2 + CaSO4
तामाको मात्रा बढी भएको अवस्थामा माछा, गाईवस्तु र माटोको गड्यौलालाई समेत असर गर्न सक्दछ । तर, अन्य विषादी भन्दा यो मिक्स्चर कम घातक हुन्छ ।
बुर्गुन्डी मिक्स्चर/मिश्रण (Burgundy Mixture)
==यी पनि हेर्नुहोस्== बोर्डो पेन्ट
↑ कृषि विकास डायरी. काठमाडौं: नेपाल बीउ व्यवसायी संघ. सन् २०११-१२. प॰ २००.
↑ "Bordeaux Mixture" @ Integrated Pest Management @ UC Davis.
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=बोर्डेक्स_मिक्सचर&oldid=764210" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०९:५८, ३ जनवरी २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।